Isle of Cats: Yakakura Furball Puzzle Board Game Ongororo - Game Point - Bhodhi uye Vhidhiyo Mitambo
Yakatumirwa ne Jonas Dammen | Kurume 28, 2022 | Mitambo yebhodhi nemakadhi, nhau, Ongororo, pamusoro
Chikamu 85%Chikamu 85%
Isle of Cats inofanirwa kuzviratidza zvakare muyedzo - kwete pasina chikonzero panguva ino: Muna Chivabvu Skellig Mitambo ichaburitsa matatu akamirirwa kwenguva refu ekuwedzera kweIsle of Cats neKittens neMhuka, Extra Boats uye Ongorora & Draw. Saka ino inguva yakanaka kwazvo yekutarisisa mutambo wepasi, wakaburitswawo neSkellig Mitambo muna 2020. Uyu mutambo wevanoziva nezve kununura yakasarudzika katsi kubva kumauto ari kuuya e villain Vesh Gloomyhand. Kudhirowa, mapuzzle uye katsi ndizvo zvakakosha zvikamu zvemutambo.
“Maererano nengano, kune chitsuwa chinoyevedza chinogarwa nerudzi rwekatsi dzekare, dzakachenjera, dzemusango uye dzinotamba. Zvichangoburwa zvakawanikwa kubva kuSquall's End zvakaratidza kuti nyaya idzi ichokwadi!
Nekudaro, njodzi inowira muchimiro cheVesh Darkhand. Anovavarira kukunda nyika yese uye ari munzira kuenda kuchitsuwa chekatsi. Vatambi, sevagari veSquall's End, vari parwendo rwekununura kuchitsuwa kuchengetedza zvisikwa zvakawanda zvechitsuwa zvinogoneka. Kuti uye sei izvi zvinofanirwa kukanganisa chirongwa chikuru cheVesh chekukunda nyika inoramba iri mubvunzo wemutambo nenyaya yayo. Asi haina kukanganisa pamutambo uye makanika ayo akanaka zvakare.
Katsi, katsi uye mamwe katsi
Huwandu hwe91 yemhuka dzakanaka vagari vechitsuwa ichi vanogona kuwanikwa mubhokisi. Vatanhatu vacho iOshax yengano, iyo yakasiyana nedzimwe katsi makumi masere neshanu, idzo dzinouya nemavara mashanu, hadzina kuiswa mubhegi rejira rakapihwa. Rondedzero yezvikamu zvemhuka inowedzerwa nematairi ehove, ayo anoshanda semari mumutambo. Pfuma yakasiyana-siyana, tswanda, bhodhi rechitsuwa, mabhodhi mana ezvikepe uye makadhi anopfuura mazana maviri anozadza zviri mukati mebhokisi hombe jena.
Idzi katsi dzakanaka dzinoda kununurwa muKati Island Mufananidzo: Skellig Mitambo
Mutambo uyu unotambwa kwemazuva mashanu (maRounds). Pane rimwe nerimwe remazuva aya, zvikamu zvishanu zvakasiyana zvinopfuudzwa. Ani nani ane mapoinzi akawanda pakupera kwezuva rechishanu kana Vesh asvika pachitsuwa anohwina mutambo. Vatambi vanogashira mapoinzi emhuri dzekatsi (angangoita 3 katsi dziri padyo dzeruvara rumwe chete), akapedza zvidzidzo uye akaunganidza zvisingawanzo hupfumi. Kune minus mapoinzi emakamuri asina kunyatsozadzwa uye makonzo anooneka pachikepe chako wega pakupera kwemutambo.
Zuva paChitsuwa - Chengetedza Katsi
Mangwanani ezuva rega rega hove dzinofanira kubatwa. Munhu wese anowana hove makumi maviri muchikamu chekuredza. Muchikamu chekuongorora, vatambi vanoongorora chitsuwa. Zvakawanikwa zvinodhirowewa muchimiro chemakadhi manomwe akadhirowewa akatarisa pasi. Zviviri zveizvi zvinosarudzwa uye zvimwe zvose zvinopfuudzwa. Kunyora kunopera kana makadhi manomwe ese asarudza. Wobva wafunga kuti ndechipi chezvawawana chaunoda kuchengeta uye wobhadhara mari inoenderana muhove. Muchikamu chechitatu, zvidzidzo zvinoverengwa. Makadhi ese eblue ezvidzidzo akabhadharwa muchikamu chapfuura anofanira zvino kutambwa. Zvidzidzo ndezvemunhu, izvo chete mutambi anoziva, uye akavhurika, izvo zvinogona kuonekwa nemunhu wese uye kuwana mapoinzi.
Zvimwe zvemhando yepamusoro zvikamu zvemutambo Mufananidzo: Jonas Dahmen
Ipapo munhu wese anosarudza muchivande panguva imwechete kuti ndeipi yemakadhi ekununura egirinhi avanoda kutamba echikamu chekununura katsi. Mukuwedzera kune mabhasikiti anodiwa pakununura, aya anoratidzawo zviratidzo zveshangu. Huwandu hwavo hunoratidza kuti ndiani anganunura katsi kubva kune imwe yenzvimbo mbiri dzezvitsuwa kutanga oiisa muchikepe chavo. Kana mabhasikiti ese ashandiswa kana nzvimbo dzese dzezvitsuwa dzisina chinhu, chikamu chechishanu chinotevera. Muchikamu chino, makadhi ehupfumi eyero uye makadhi ebrown Oshax anogona kuridzwa mukurongeka kwechikamu chechina uye anoenderana mataira anogona kuiswa pachikepe chako wega.
Panopera kutenderera pakupera kwezuva, chero katsi dzichiri munzvimbo dzinotiza dzodzoserwa mubhokisi. Chero makadhi nehove zvinenge zvasara zvinochengetwa.
Munguva imwe neimwe yezvikamu izvi, iyo yepepuru Chero nguva makadhi anogona kuridzwa, ayo anopa akasiyana mhedzisiro.
Mutambo wacho unopawo mararamiro emhuri. Mune izvi, chinotariswa chiri papuzzle nekatsi mataira. Hakuna hove uye katsi hazvidi kununurwa nemabhasikiti. Kudhirowa hazvina basa futi. Mapoinzi akagoverwa kumagumo sezviri mumhando yakasiyana. Izvo chete zvinosiya zvidzidzo. Kune makadhi echidzidzo chemhuri akakosha, ekuti munhu wese anowana vatatu vakatarisana pasi pekutanga uye osarudza maviri eawa.
Sibling Contest - Iyo Solo Mode
Kuvakwa kwehanzvadzi iyi kunotora nzvimbo shoma uye iri nyore kutamba Mufananidzo: Jonas Dahmen
Mune solo mode, unokwikwidza nehanzvadzi yako. Akapinda muchikepe uye ari kuyedza kutora mbiri yekushanda nesimba kwaari. Chimiro chinogadziridzwa kune izvi nekukurumidza. Ane makadhi mashanu anoratidza imwe yemasutu ekitsi mashanu, rimwe rawo rinoratidzwa denderedzwa rega rega. Pakupera kwemutambo, anogashira mapoinzi mashanu emuvara wakaratidzwa kutanga, mapoinzi mana emakadhi akazarurwa muchikamu chechipiri, zvichingodaro.
Chikepe chizere nehafu chine katsi uye pfuma Mufananidzo: Jonas Dahmen
Hanzvadzi iyi inowanawo mapoinzi ezvidzidzo zvayo zvega. Iyo yakaoma inogona zvakare kugadziriswa kuburikidza nehuwandu hwezvidzidzo zvega mumutambo. Kuwanda kuriko, ndiko kunowedzera kuoma kwazvinoita. Kuchengetedza katsi, sisi vane deki yavo (solo baskets). Makadhi anoratidza kuti vangani uye ndeipi yekatsi ichabviswa munzvimbo uye kana mamwe mataira achatorwa.
Kana mutambi ari ega aine mapoinzi akawanda kupfuura sisi vake, mutambo unohwinwa.
Nhamba yevatambi: 1-4
Kukurudzira kwenguva refu: zvakanaka
Category: Kenner mutambo (ine mhuri mutambo musiyano)
Maitiro makuru: kunyora, kuseta kuunganidza, kuisa mataira
Vanyori: Frank West
Muparidzi: Skellig Games / Guta reMitambo
Mutengo: 50 euros
Isle of Cats ichiri mutambo wakakurumbira kupfuura makore maviri mushure mekunge waburitswa muChirungu. Iyo iri muchikamu chepamusoro zana paBoardGameGeek uye ingori kunze kwepamusoro gumi muchikamu chemhuri.
Dingindira idzva, rakasiyana uye rine hunyanzvi hunoshamisa. Hazvinetse kuti iyo michina yaizoshanda zvakanaka kana, pachinzvimbo chekununura katsi nekudziisa muchikepe, wakatenga zvimedu zvemucheka uye waifanira kusona gumbeze reinodiwa (chikepe) chimiro kubva mazviri. Bhuku remitemo rinoitawo chikamu chikuru mukuona kuti musoro wacho hauratidzike wakanyanyokwirira. Pano, nechiito chese, nguva inotorwa yekumisikidza mechanics munyaya mubhokisi rekuwedzera. Mimwe mitambo mizhinji inogona kudzidza zvakawanda kubva mubhuku remitemo. Chimiro chakajeka chine zvikamu zvishanu uye kunyudzwa kwemakanika munyaya inoitwa zvakanakisa. Iyo yakanaka uye yakajeka kurongeka nemienzaniso inoita kuti bhuku rekutonga rive rimwe revamiriri vakanakisa verudzi rwayo.
Zvese zvikamu zvemutambo ndezvemhando yakanaka kwazvo. Matiles ese akagadzirwa nekadhibhodhi gobvu uye, kana iri katsi, anogona kumira akarara mubhegi uye akasanganiswa pasina kukuvara. Paunenge uchiita chirahwe, dzimwe nguva zvinonetsa kuisa katsi munzvimbo chaiyo nekuti mataira anongotadza kukwana uye mukati memumwe nemumwe. Mamepu ane saizi yakanaka uye mhando uye ese akakodzera zviratidzo zvinooneka uye zvinonzwisisika. Chete mataira mashanu ehove ndiyo optically isina kujeka. Zvisinei, sezvo yakanyatsosiyanisa kubva kune imwe chete saizi yematairi ehove, iyi haisi dambudziko. Mamwe makadhi akatove akabatanidzwa anosiyanisa katsi dzakasiyana zvichienderana nechimiro chemiswe yavo, kuitira kuti zvive nyore kusiyanisa pakati pavo kunyange kana uine matambudziko ekuona uye kusiyanisa mavara.
Iwo ega ega nhanho dzimwe nguva anoita seanodzedzereka uye maviri makuru mechanics epuzzle uye kunyora anoenderana nemumwe, asi haana kunyatsobatana nekuda kwekunyatso kupatsanurwa kwezvikamu. Zvakadaro, ese ari maviri anokwana zvakanyanya mumutambo. Kwete zvishoma nekuda kwerudo rwakaiswa mubhuku rekutonga.
Kunyora makadhi kunoshanda zvinoshamisa kunyange nevanhu vaviri. Dziva rakazara remikana rakakura nevatambi vakawanda, asi pane mukana chete wekufungidzira nezvekudzoka makadhi kana paine magumo maviri emutambo. Izvo zvakanaka zvezvimwe zvingasarudzwa zvinonyanya kuoneka mumakati anotorwa zvichienderana nehuwandu hwevatambi. Kusimba pano, asi hongu zvakare nemakadhi, asi pane chinhu chemhanza chisingafanirwe kuregererwa. Kana mavara chaiwo kana maumbirwo asina kuiswa, kupedza zvidzidzo dzimwe nguva hazvigoneke kusvika kumagumo. Kana zvasvika kumakadhi, makadhi ekununura egirinhi anonyanya kukosha. Pasina ivo hapazove nematengu akakwana aripo uye nzvimbo yakawanda icharamba yakasununguka muchikepe. Sezvo iwe usina nyanzvi yemutambo ine yakanyanyisa hurongwa zvinoda neInsel der Katzen, asi mutambo we connoisseur pamuganhu wemutambo wemhuri, kuvapo kwerombo rakanaka haisi iyo yakaipa pfungwa. Kuravira kwega kwega kunoita basa rakakura pano.
Kugoverwa kwemapoinzi kumagumo dzimwe nguva kunonzwa kusanyatso kugutsikana kana iwe ukarasikirwa nekota yemapoinzi ako nekuda kwemaminus mapoinzi akawanda anopihwa kumakamuri asina kunyatsozadzwa. Nemakamuri manomwe, izvi zvinogona kuwedzera kusvika makumi matatu nemashanu mapoinzi. Kazhinji yenguva, zvisinei, iri pakati pegumi nemakumi maviri mapoinzi anobviswa.
Chikumbiro chekudzokorora chemutambo chakanyanya kukwirira. Nekuda kwezvidzidzo zvakasiyana zvinogona kutambwa uye kutsamira pamakadhi akadhonzwa nekatsi, mutambo wega wega wakasiyana kubva pakutanga. Kudyidzana pakati pevatambi kwakanaka kwazvo. Ehe, pakunyora (kunyanya vaviri vaviri), asiwo pakusarudza katsi uye nekusarudza kuti vangani uye ndeapi egirinhi makadhi ekununura ekutamba, izvi zvakakwirira kwazvo.
Imwe huru yekuwedzera ndeye solo modhi. Hapana sango remitemo kana zviratidzo izvo hanzvadzi inotsausa kubva pakufamba kwayo. Iko kuenzana kwakanaka pakati peruzivo rwakavhurika nerwakavanzika kunoita kuti sisi varatidzike se "munhu". Kunyora kwakagadziridzwa zvakanaka kwazvo uye sarudzo yegirinhi makadhi inoramba yakakosha. Kukosha kwemuvara wemakati akasarudzwa kunowedzera zvakanyanya mukutamba kwega, kungoita kuti mutambo uve nani. Iyo yakawanda-level kugadziriswa kwekuoma uye kusiyanisa kwepamusoro muchimiro chesisita kutenderedza solo modhi zvakakwana. Pano zvakakodzera kutenga mutambo wacho kunyangwe uchiutamba wega nguva zhinji.
Undecided inogonawo kutamba mu nhandare yebhodhi Edza mahara.
Skellig TCOK601 Mitambo 48002 - The Island of Cats * 39,99 EUR tenga
mhedziso Nekutarisisa kukuru kune zvakadzama, Insel der Katzen inokwanisa kukwezva vatambi nedingindira rayo rakasiyana. Haisi chete vanoda katsi vanonakidzwa nekutamba kwenguva yakareba kwazvo kana vakabatanidzwa mumutambo, izvo zvinosanganisira rombo rakanaka.
Kare Mukana, kwete njodzi: "FIFA 23" ichakurumidza kunzi EA Sports FC?
Inotevera Nhau: Kosmos inozivisa mitambo yekudonha
Prime Gaming uye Riot Mitambo inoshandira pamwe: Exclusive zvinhu
Steam inopemberera rekodhi nhamba dzemitambo muna 2020